Ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke mkpụrụ osisi ọhụrụ chara acha, na mmepụta nke jams kwesịrị ilekwasị anya n'akụkụ abụọ
N'oge ọkọchị, melon ọhụrụ na mkpụrụ osisi nke agba dị iche iche dị n'ahịa, na-eweta oke nri nke akụrụngwa na ahịa nhazi nke mkpụrụ osisi. Na ụlọ ọrụ na-emepụta mkpụrụ osisi miri emi, jam bụ otu n'ime ngalaba ahịa kachasị mkpa. Jam dị ụtọ ma sie ike, ma a na-etinye ya achịcha ma ọ bụ na yogọt, nwere ike ime ka ndị mmadụ nwee agụụ. E nwere ọtụtụ ụdị jams na ahịa, gụnyere cherry jam, strawberry jam, blueberry jam na na. Site na mmepe nke teknụzụ nri, mmepụta nke jam enwewo ike akpaghị aka, mana nchekwa nri ka chọrọ nlebara anya.
Jam nwere ogologo akụkọ ihe mere eme jam. N'oge gara aga, ịme jam bụ ụzọ iji chekwaa mkpụrụ ruo ogologo oge. Naa, jam aghọwo ihe dị mkpa alaka nke mkpụrụ osisi miri emi nhazi ahịa. Ndekọ ọnụ ọgụgụ sitere na Ngalaba Nyocha nke Statista gosipụtara ahịa nke jams, jellies na jams nke Canada site na otu maka izu 52 kwụsịrị na Jenụwarị 6, 2016. N'ime oge a, ahịa Marmalade dị ihe dịka $ 13.79 nde.
Ezie na ọnụ ọgụgụ nke ahịa ahịa na-ịgbasa, na jam mmepụta usoro a na-mgbe niile upgrading. Ogo nke mkpụrụ osisi bụ isi ihe na-emepụta jam. Ya mere, mkpụrụ osisi kwesịrị ịhazi tupu ịmịpụta. A na-amị mkpụrụ osisi ahụ site na igwe igwepụta mkpụrụ osisi, a na-ahọpụta mkpụrụ ọjọọ, ma na-eji ngwa ngwa dị elu eme ihe.
Mgbe edozi ihe akụrụngwa, ọ ga-abanye na njikọ njikọ mmepụta jam. Mmepụta usoro nke jam ga-aga site na usoro nke ịsa mkpụrụ osisi, ịcha, iti, tupu isi nri, agụụ ịta ahụhụ, canning, nwoke ịga ụlọ ọgwụ, wdg The akpaghị aka na akụrụngwa aka gụnyere mkpụrụ ịsa igwe, mkpụrụ osisi ịcha igwe, pulping igwe, tupu isi nri igwe, concentrator, ndochi na akara igwe, elu nsogbu nwoke ịga ụlọ ọgwụ ite, wdg Site n'enyemaka nke ndị a ukwuu akpaghị aka akụrụngwa, ogo akpaaka na jam mmepụta e ukwuu mma, nke nwere ike na-ewetara ọkụ eletrik na elu mma.
Dabere na ozi ọma nke nri na usoro ịdọ aka ná ntị nke European Union wepụtara n'oge na-adịbeghị anya, ụfọdụ anụ ụlọ bluuberi na Germany adaala na mma na nchekwa, iko flakes apụtawo na ngwaahịa a. Ndị na-emepụta jam nke ụlọ ga-ewere nke a dịka ịdọ aka ná ntị, na-achịkwa gburugburu ebe obibi na usoro mmepụta, ma kpachara anya.
Nke mbụ, ụlọ ọrụ ga-ezere mmetọ sitere na gburugburu ebe obibi. Ekwesiri ka emeputa ulo oru mmeputa ihe dika ulo oru di ocha nke na-agbaso ụkpụrụ. Ekwesịrị ịwụnye igwe ikuku n'ọnụ ụzọ iji gbochie mmetọ ndị ọrụ na-abanye ma na-apụ na ogbako ahụ. Nke abuo, odi nkpa ikpochapu ihe eji emeputa ihe, ma jiri sistemu nhicha nke CIP kpochapu na ihichapu ihe eji emeputa ihe n'oge iji gbochie mmeghari nke ndi ozo. Ọzọkwa, nyocha ụlọ ọrụ nke ngwaahịa enweghị ike ileghara anya. Ekwesịrị iji ihe oriri na nchekwa nyocha ga-enyocha ihe nchekwa dị iche iche. Dịka ọmụmaatụ, ngwa nyocha nke ndị si mba ọzọ nwere ike igbochi jams nwere iko shards ịbanye n'ahịa ahụ.
Site na ndị na-azụ ahịa post-90s jiri nwayọ bi na isi ahịa, ahịa ndị ahịa nke ụlọ ọrụ jam ka mepere emepe. Maka ndị na-emepụta jam, ọ bụrụ na ha chọrọ imebi iwu, ha kwesiri iji akụrụngwa na-arụpụta ngwa ngwa dị iche iche iji bulie ogo nke nrụpụta ọrụ, ma na-elebara ịdị ọcha na nchekwa nri anya, ma na-eme ka asọmpi zuru oke nke ngwaahịa sitere n'ọtụtụ akụkụ. .